आउनुपर्‍थ्यो सेयर आयो बिरालो, दिपकलाई भाष्करको यस्तो झटारो ! - Purbeli News
प्रकाशित मिति: बिहिबार, बैशाख ०६, २०७५ समय: १६:५७:२९
काठमाडौं । फिल्म निर्माता दिपकराज गिरी सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा हरेक विषयमा व्यंग्य गर्न आतुर हुन्छन् । व्यंग्यले अरूलाई हैरान पार्ने दिपकलाई यसपटक फिल्म हलवालाले ‘खुत्रुक्क’ हुनेगरी भनेका छन् । तर्क मागिरहेका क्युइफएक्स संचालक भाष्कर ढुंगानासामु अन्तत: दिपकले आत्मसमर्पण गर्दै ‘माया’को ढालले छेकेका छन् । दिपक र भाष्करबीच एउटा फेसबुक स्ट्याटसपछि तर्कवितर्क सुरू भएको थियो ।
‘फिल्म चलेपछि निर्माताको हातमा आउनुपथ्र्यो सेयर, तर आउँछ बिरालो । अब यो सिन्डिकेटविरुद्ध..’, दिपकले स्ट्याटस लेखेपछि भाष्करले जवाफ दिए,‘तपाईंलउ गरेको व्यापारिक सम्झौताअनुसार तपाईंलाई कसैले सेयर दिएको छैन भने पुलिस प्रशासनकहाँ जान सक्नुहुन्छ । होइन भने यस्तो भ्रमपूर्ण र हल्का विचार राखेर प्रदर्शक साथीहरुर्लाइ अपमान नगर्नु भन्ने मेरो आग्रह ।’
दिपकले फेरि लेखे,‘हिजो हजूर बुबाले बिरालो बाँधेको कागजमा मैले त हस्ताक्षर गरे होला मेरो भाबि पुस्ताले नगर्न सक्छ । आफूले पाउदै आएको । कुरा अव्यवहारिक छ भन्दा हलुका नलाग्नु पर्ने !’
दुवैबीच निक्कै बेर घोचपेच चलेको थियो ।
भाष्कर लेख्छन्,‘आफूले पाउदै आएको कुरा किन अब्यबहारिक छ नखुलाईकन अरुलाई बिरालो बाँधेको संझौता भन्नु हलुका नै हो हैन ? किन अब्यबहारिक छ त सुनु न हामी पनि ? किन अर्कै संझौता हुन पर्ने ?’ साभार श्राेत ः दैनिक नेपाल
कुराकानीमा अगाडी के–के भयो ? यहाँ हेर्नुहोस् ।